माई भ्यालेनटाइन : आमा अनि प्रेमिका, महत्व कसलाई ? (पूरा फिल्म) | Screennepal
माई भ्यालेनटाइन : आमा अनि प्रेमिका, महत्व कसलाई ? (पूरा फिल्म)
२०७४, २९ माघ सोमबारscreennepalfeature, Movie0
काठमाडौं, २७ माघ । ‘माई भ्यालेनटाइन’ अर्थात मेरो भ्यालेनटाइन । शीर्षक नै काफी छ कि यो पक्कै एउटा प्रेमकथा हो । १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रणय दिवशलाई लक्षित छोटो फिल्म हो, ‘माई भ्यालेनटाइन’ । ‘भ्यालेनटाइन–डे’ लाई युवापुस्ता भनौ या प्रेमिल जोडीले महत्वका साथ लिइरहेका बेला यो फिल्म सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो भ्यालेनटाइन कथा यसैमा केन्द्रित छ, जसले धेरैलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ । तर, सबै प्रेमी त्यस्ता हुँदैनन्, जो प्रेमिका लागि आमालाई ओझेलमा राख्न सकोस् किनकि आमा जो संसारकै सबैभन्दा ठूलो ममताकी खानी हुन् । तर, यहाँ बदलिँदो जमानामा आमाभन्दा ठूलो प्रेमी वा प्रेमिका भन्नेहरु पनि नहोलान् भन्ने होइन । अरु जे भएपनि यो फिल्म हेरेपछि एउटा बहस भने पक्कै सिर्जना गर्नेछ । यस फिल्मको परिकल्पना तथा निर्देशन गीतकार तथा मोडल दर्पण राई गरेका हु्न ।
फिल्ममा दर्पणसँगै मोडल सम्झना राईले अभिनय गरेका छन् । दर्पण अलिक फरक किसिमको काम गर्न रुचाउँछन् । त्यसैको पछिल्लो परिणाम हो यो । फिल्म हेर्नुहोला अनि आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
Previous Postप्रचण्डले उद्घाटन गर्दै सुरु भयो "शिक्षाखबर" अनलाईन डिजिटल पत्रिका Next Postसुरेनलाई चटारो : महिना दिन नपुग्दै १२ गीत रेर्कड !